ဆှမြေိုးပေါကျဖျော အိမျနီးခငျြးကောငျးမိတျဆှပေီသစှာဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံအရေး ကူညီလုပျဆောငျမှုအခွအေနမြေားအပျေါ ရငျးနှီးစှာတှဆေုံ့ဆှေးနှေး » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
နပွေညျတျော၊ အောကျတိုဘာ – ၁၇
NCA သညျငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ကနဦးခွလှေမျးဖွဈကွောငျး၊ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲပွီးမှသာ နိုငျငံရေးအရ ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးမှုမြား ဆကျလကျပွုလုပျရမညျဖွဈကွောငျး၊ နိုငျငံရေးတှငျ လကျနကျကိုငျလမျးစဉျဖွငျ့ သှား၍မရနိုငျကွောငျး၊ သို့ဖွဈ၍ NCA လကျမှတျရေးထိုးရနျမှာ ကနဦးလိုအပျခကျြဖွဈကွောငျး၊ တပျမတျောအနဖွေငျ့ လကျမှတျရေးထိုးရနျကနျြရှိသညျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့မြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးရနျ အသငျ့ရှိကွောငျးဖွငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယျစားလှယျ H.E.Mr. Sun Guoxiang အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့စဉျ ထညျ့သှငျးပွောကွားသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယျစားလှယျနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာတရုတျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Hong Liang ၊ စဈသံမှူး နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ဦးစှာဧညျ့သညျတျောအထူးကိုယျစားလှယျက တရုတျနိုငျငံအစိုးရ၏ ရပျတညျခကျြမှာ မွနျမာနိုငျငံ၏ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျကို ခိုငျခိုငျမာမာ ထောကျခံပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျမှာ ကောငျးမှနျသညျ့ အလားအလာမြားရှိသညျဟုလညျး ယုံကွညျကွောငျးပွောကွား၍ မွနျမာနိုငျငံမွောကျပိုငျးရှိ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့မြားနှငျ့ ပိုမိုနီးကပျစှာဆကျဆံ၍ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျပေးနမှေု အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စတှငျ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရနှငျ့ တပျမတျောအနဖွေငျ့ နိုငျငံ၏လှတျလပျရေးနှငျ့ အခြုပျအခွာအာဏာ တညျတံ့ခိုငျမွဲရေးအတှကျ ထိနျးသိမျးလုပျဆောငျနေ သညျကို သိရှိထောကျခံပွီး အိမျနီးခငျြးမိတျဆှကေောငျးပီသစှာဖွငျ့ ဆကျလကျရပျတညျကူညီလုပျဆောငျသှားမညျ့ အခွအေနမြေား၊ အကွမျးဖကျမှု ကာကှယျတားဆီးရေးလုပျငနျးမြားတှငျ နီးကပျစှာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုအပါအဝငျ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မွှငျ့တငျရေးကိစ်စရပျမြား၊ တရုတျနိုငျငံတှငျ ပွုလုပျတော့မညျ့(၁၉)ကွိမျမွောကျ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီကှနျဂရကျနှငျ့ ပတျသကျသညျ မြားကို ဆှေးနှေးပွောကွားသညျ။
ဧညျ့သညျတျောအထူးကိုယျစားလှယျ၏ ဆှေးနှေးမှုမြားအပျေါ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာနိုငျငံ၏ ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျမြားတှငျ ပူးပေါငျးပါဝငျ ဆောငျရှကျမှု၊ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး ကုလသမဂ်ဂအပါအဝငျ နိုငျငံတကာမကျြနှာစာတှငျ မွနျမာနိုငျငံဘကျမှ မှနျကနျစှာထောကျခံရပျတညျခဲ့မှုမြားတှကျ ကြေးဇူးတငျရှိကွောငျး ပွနျလညျပွောကွား၍ နိုငျငံတညျငွိမျအေးခမျြးမှုအတှကျ ငွိမျးခမျြးရေးမဖွဈမနရေရှိအောငျ ဆောငျရှကျရနျလိုအပျမှု၊ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျး ၁၆ ဖှဲ့နှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပွီး NCA ကိုအကောငျအထညျဖျောဆောငျ ရှကျခဲ့သျောလညျး အဖှဲ့ ၈ ဖှဲ့နှငျ့သာလကျမှတျရေးထိုးနိုငျခဲ့မှု၊ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးနှငျ့ ဒို့တာဝနျအရေးသုံးပါးကိုလကျခံ ထိနျးသိမျးလိုမှုအပျေါအခွခေံပွီး တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အားလုံး NCA တှငျ ပါဝငျလကျမှတျရေးထိုးနိုငျရေးအတှကျ တပျမတျောအနဖွေငျ့ လကျမှတျရေးထိုးရနျ ကနျြရှိသညျ့အဖှဲ့မြားနှငျ့ ဆှေးနှေးညှိနှိုငျး မှုမြားပွုလုပျရနျ အသငျ့ရှိမှုမြားအား ဆှေးနှေးပွောကွားသညျ။
ဆကျလကျပွီး ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ နိုငျငံတျောအစိုးရနှငျ့ တပျမတျောအနဖွေငျ့ တရားဥပဒနှေငျ့အညီ မှနျကနျစှာလုပျဆောငျနသေျောလညျး နိုငျငံတကာမှသိရှိထားသညျ့ အခကျြအလကျမြားမှာ မှားယှငျးနကွေောငျး၊ တရုတျနိုငျငံသံ အမတျကွီးတို့ကိုယျတိုငျ ယငျးဒသေကိုရောကျရှိပွီး မကျြမွငျတှရှေိ့ခဲ့ပွီးဖွဈ၍ ပွီးပွညျ့စုံသညျမဟုတျသညျ့တိုငျ ခိုငျမာသညျ့ သကျသအေထောကျအထားတခြို့ ရရှိမညျဟုယုံကွညျကွောငျး၊ ရခိုငျဒသေအခွအေနမှေနျမြားကို နိုငျငံတကာမှ မှနျကနျစှာသိရှိစရေနျ ဝိုငျးဝနျးကူညီလုပျဆောငျပေးစလေိုကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံအပါအဝငျ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံအားလုံးနှငျ့ ခဈြကွညျရငျးနှီးစှာဆကျဆံ၍ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား မွှငျ့တငျလုပျဆောငျနကွေောငျး၊ ထိုသို့လုပျဆောငျရာတှငျ မွပွေငျတှငျဖွဈပကျြနသေညျ့ အရှိတရားမြားကို မှနျမှနျကနျကနျသိရှိလကျခံရနျ အရေးကွီးကွောငျး၊ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ ဘကျသို့ထှကျပွေးသညျ့ ဘင်ျဂါလီမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ ရပျတညျပွောဆိုခကျြတခြို့မှာ ပုံကွီး ခြဲ့ပွောဆိုမှုမြားရှိပွီး မမှနျကနျကွောငျး၊ မိမိတို့အနဖွေငျ့ အပွုသဘောဆောငျသော ကောငျးမှနျသညျ့ လုပျဆောငျခကျြမြားကို ညှိနှိုငျးလုပျဆောငျသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ အကွမျးဖကျမှုကာကှယျတားဆီးရေးတှငျ နီးကပျစှာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုအပါအဝငျ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားလညျး ပိုမိုမွှငျ့တငျလုပျဆောငျ သှားမညျဖွဈကွောငျး ရှငျးလငျးပွောကွား၍ တရုတျပွညျသူ့ကှနျမွူနဈပါတီ၏ (၁၉)ကွိမျမွောကျ ကှနျဂရကျနှငျ့ပတျသကျပွီး အောငျမွငျပါစကွေောငျးနှငျ့ တရုတျနိုငျငံ၏ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု ပိုမိုခိုငျမာရေးအတှကျ ဆုံးဖွတျလုပျဆောငျမှုမြားရရှိပါစကွေောငျး ဆုမှနျကောငျးတောငျး ပွောကွားသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယျစားလှယျတို့သညျ တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွပါသညျ။
ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် အိမ်နီးချင်းကောင်းမိတ်ဆွေပီသစွာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအရေး ကူညီလုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများအပေါ် ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ – ၁၇
NCA သည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကနဦးခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲပြီးမှသာ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးတွင် လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ဖြင့် သွား၍မရနိုင်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရန်မှာ ကနဦးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးရန်ကျန်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် အသင့်ရှိကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် H.E.Mr. Sun Guoxiang အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang ၊ စစ်သံမှူး နှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဦးစွာဧည့်သည်တော်အထူးကိုယ်စားလှယ်က တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရ၏ ရပ်တည်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ထောက်ခံပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ကောင်းမွန်သည့် အလားအလာများရှိသည်ဟုလည်း ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြား၍ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်ဆံ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စတွင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်နေ သည်ကို သိရှိထောက်ခံပြီး အိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေကောင်းပီသစွာဖြင့် ဆက်လက်ရပ်တည်ကူညီလုပ်ဆောင်သွားမည့် အခြေအနေများ၊ အကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများတွင် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပါအ၀င် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်တော့မည့်(၁၉)ကြိမ်မြောက် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကွန်ဂရက်နှင့် ပတ်သက်သည် များကို ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
ဧည့်သည်တော်အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ ဆွေးနွေးမှုများအပေါ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ မှန်ကန်စွာထောက်ခံရပ်တည်ခဲ့မှုများတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြား၍ နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးမဖြစ်မနေရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်မှု၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ၁၆ ဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး NCA ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်ခဲ့သော်လည်း အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့နှင့်သာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့မှု၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းနှင့် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကိုလက်ခံ ထိန်းသိမ်းလိုမှုအပေါ်အခြေခံပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး NCA တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် တပ်မတော်အနေဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ကျန်ရှိသည့်အဖွဲ့များနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း မှုများပြုလုပ်ရန် အသင့်ရှိမှုများအား ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် တပ်မတော်အနေဖြင့် တရားဥပဒေနှင့်အညီ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နေသော်လည်း နိုင်ငံတကာမှသိရှိထားသည့် အချက်အလက်များမှာ မှားယွင်းနေကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင် ယင်းဒေသကိုရောက်ရှိပြီး မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ပြီးပြည့်စုံသည်မဟုတ်သည့်တိုင် ခိုင်မာသည့် သက်သေအထောက်အထားတချို့ ရရှိမည်ဟုယုံကြည်ကြောင်း၊ ရခိုင်ဒေသအခြေအနေမှန်များကို နိုင်ငံတကာမှ မှန်ကန်စွာသိရှိစေရန် ၀ိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ဆောင်ပေးစေလိုကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအပါအ၀င် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအားလုံးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် မြေပြင်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့် အရှိတရားများကို မှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိလက်ခံရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဘက်သို့ထွက်ပြေးသည့် ဘင်္ဂါလီများနှင့်ပတ်သက်၍ ရပ်တည်ပြောဆိုချက်တချို့မှာ ပုံကြီး ချဲ့ပြောဆိုမှုများရှိပြီး မမှန်ကန်ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် အပြုသဘောဆောင်သော ကောင်းမွန်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးတွင် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပါအ၀င် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလည်း ပိုမိုမြှင့်တင်လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား၍ တရုတ်ပြည်သူ့ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ (၁၉)ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အောင်မြင်ပါစေကြောင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပိုမိုခိုင်မာရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်မှုများရရှိပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်း ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်တို့သည် တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါသည်။